Jôhany 1, Bible Interconfessionelle (DIEM) | Chapter 1 | The Bible App | Bible.com
Malagasy - Interconfessional Version (NT)
© 2003 Société Biblique Malgache
Ilay Teny no aina sy fahazavana
1Tamin'ny voalohany, fony nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia efa nisy ilay Teny; ilay Teny dia nitodika tany amin'Andriamanitra hatrany, ary ilay Teny dia Andriamanitra. 2Tamin'ny voalohany, dia nitodika tany amin'Andriamanitra ilay Teny#1.2 Ampit and 1-2 sy Ohab 8.22-26.; 3Izy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka raha tsy teo Izy dia tsy nisy ary ny zavatra noarîna#1.3 Ampit Gen 1.3; Sal 33.6,9; 1Kôr 8.6; Kol 1.16-17.. 4Ilay Teny no nirakitra ny aina#1.4 ka raha tsy teo Izy dia tsy nisy ary ny zavatra noarîna (and 3). Ilay Teny no nirakitra ny aina (and 4): dkt hafa (raha ovàna ny maripijanonana ao amin'ny rijan-teny grika fototra) ka raha tsy teo Izy dia tsy nisy zavatra ary; ny zavatra noarîna dia tao aminy no nisy aina. , ary io aina io no nitondra fahazavana ho an'ny olombelona. 5Ary ny fahazavana dia mamirapiratra anatin'ny haizina, ka tsy nahasakana azy ny haizina#1.5 ka tsy nahasakana azy ny haizina: dkt hafa fa tsy nandray azy ny haizina. .
6Nisy lehilahy anankiray nirahin'Andriamanitra: i Jôhany#1.6 I Jôhany Mpanao batisa izany: jereo 1.19-36. no anarany. 7Tonga hijoro ho vavolombelona i Jôhany, dia vavolombelona hanambara ilay fahazavana; ka ny hafatra nampitain'i Jôhany no hampino ny olona rehetra. 8Tsy hoe i Jôhany no fahazavana, fa izy no ho vavolombelona hanambara ny fahazavana.
9Ilay Teny no tena fahazavana tonga amin'izao tontolo izao* sady manazava ny olombelona rehetra. 10Teo amin'izao tontolo izao ilay Teny; ary Izy no nahariana an'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao#1.10 Jereo and 3. dia tsy nahalala Azy. 11Tonga teo amin'ny taniny#1.11 taniny na hoe izao tontolo izao izay fananany. Izy, fa tsy noraisin'ny mpiray firenena aminy. 12Kanefa izay rehetra nandray Azy ary nino Azy, dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra*#1.12 Ampit Gal 3.26; 1Jôh 3.1-2.: 13izy ireo dia nateraka tsy araka ny fomban'olombelona miankina amin'ny sitrapon-dehilahy, fa araka ny fomban'Andriamanitra.
14Ilay Teny dia tonga olombelona, ka niara-nonina taminay. Feno fahasoavana sy fahamarinana Izy ary hitanay ny voninahiny#1.14 niara-nonina: ara-bakiteny kokoa niara-nitoetra an-day. –ary... voninahiny: ampit Is 60.1-2., dia voninahitra avy amin'ny Ray ho an'ny Zanaka lahitokana. 15Vavolombelona manambara Azy i Jôhany ka niantso mafy hoe:
–Izy no Ilay voalazako hoe: «Ilay tamy aoriako dia lehibe noho izaho, satria efa nisy talohako#1.15 Jereo 1.30..»
16Feno harem-pahasoavana ilay Teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozin-tsy ritra: 17satria ny lalàna* dia nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy#1.17 Jereo Eks 31.18; 34.28., fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy*. 18Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana#1.18 Ampit Eks 33.20.; fa ny Zanaka lahitokana, Izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ny Ray, no efa nanambara Azy.
Ny hafatr'i Jôhany Mpanao batisa
(Jereo Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.15-17)
19Toy izao no fijoroan'i Jôhany ho vavolombelona. Nisy mpisorona sy levita* nirahin'ny manampahefana jiosy avy any Jerosalema hankeo aminy, mba hanontany azy hoe:
–Iza moa ianao?
20Tsy nandà ny hamaly izy fa nilaza mazava hoe:
–Tsy izaho no ilay Mesia*!
21Ary nanontany azy ry zareo hoe:
–Ahoana àry? I Elià* ve ianao?
Dia novaliany hoe:
–Tsy izy aho!
Ka hoy ireo taminy:
–Ilay Mpaminany* ve ianao?
Fa novaliany hoe:
–Tsia#1.21 Jereo Mal 3.23; Deot 18.15,18.!
22Tamin'izay ry zareo dia niteny tamin'i Jôhany hoe:
–Iza àry ianao, mba hitondranay valin-teny any amin'izay naniraka anay? Lazainao ho iza ny tenanao!
23Dia hoy izy:
–Izaho no «feon'olona miantso mafy ao an-taniefitra hoe: ahitsio ny lalan'ny Tompo#1.23 Is 40.3, voatsiahy araka ny dkt grika tranainy Septoazinta.», araka ny tenin'i Isaià mpaminanin'Andriamanitra.
24Ary nisy avy amin'ny Farisianina*#1.24 Ary nisy... Farisianina: dkt hafa Ary Farisianina. ireto olona nirahina teo amin'i Jôhany, 25ka nanontany azy hoe:
–Nahoana àry ianao no manao batisa*, raha toa tsy ianao no ilay Mesia na i Elià na ilay Mpaminany?
26Ka novalian'i Jôhany hoe:
–Ny ahy, ao amin'ny rano no anaovako batisa; fa eo anivonareo misy olona anankiray tsy fantatrareo, 27dia Ilay tamy aoriako, ary tsy mendrika hamaha ny fehikapany akory aho!
28Izany zavatra izany dia niseho tany Betania#1.28 Betania: tanàna kely tsy dia fantatra toerana mazava tsara teo ampita atsinanan'ny ony Jôrdàna; tsy tokony hampifangaroina amin'ilay Betania akaikin'i Jerosalema (Jereo 11.1)., andafy atsinanan'ny ony Jôrdàna, teo amin'ny fanaovan'i Jôhany batisa.
I Jesoa no Zanakondrin'Andriamanitra
29Nony ampitso, dia nahita an'i Jesoa avy nanatona azy i Jôhany ka hoy izy:
–Indro ny Zanakondrin'Andriamanitra, Ilay manala ny fahotan'izao tontolo izao#1.29 Ampit Is 53.6-7.! 30Izy indrindra Ilay nolazaiko hoe: «Misy lehilahy tamy aoriako, Izay lehibe noho izaho, satria efa nisy talohako.» 31Ary izaho dia tsy nahalala Azy; fa mba hampisehoana Azy amin'ny vahoaka Israely no nahatongavako hanao batisa ao amin'ny rano.
32I Jôhany no vavolombelona nanambara hoe:
–Efa hitako ny Fanahy Masina nidina avy any an-danitra toy ny voromahailala, ka nitoetra teo amboniny#1.32 Ampit Is 11.2; 61.1.. 33Ary izaho dia tsy nahalala Azy; fa Andriamanitra, Izay naniraka ahy hanao batisa* ao amin'ny rano, no nilaza tamiko hoe: «Ilay ho hitanao idinan'ny Fanahy Masina sy itoerany eo amboniny, dia Izy no Mpanao batisa ao amin'ny Fanahy Masina.» 34Ary nahita aho, ka dia vavolombelona manambara fa Izy no Zanak'Andriamanitra*.
Ireo mpianatr'i Jesoa voalohany
35Ny ampitson'iny indray, dia mbola teo ihany i Jôhany sy ny mpianany* roa lahy; 36ary nahatazana an'i Jesoa nandalo i Jôhany ka hoy izy hoe:
–Indro ny Zanakondrin'Andriamanitra#1.36 Jereo 1.29.!
37Nandre an'i Jôhany niteny izany ireto mpianany roa lahy ka lasa nanaraka an'i Jesoa. 38Ary nitodika i Jesoa ka nahita azy roa lahy nanaraka, dia nanao taminy hoe:
–Inona no tadiavinareo izay?
Ka novalian'izy roa lahy hoe:
–Rabỳ#1.38 Rabỳ: teny aramianina. ô, (izany hoe Mpampianatra ô, raha adika), aiza ianao no mitoetra?
39Dia hoy i Jesoa taminy:
–Avia, fa ho hitanareo!
Koa dia nandeha izy roa lahy ka nahita izay nitoeran'i Jesoa ary nitoetra teo aminy tamin'io andro io. (Tokony ho tamin'ny efatra tolakandro tamin'izay).
40I Andrea, rahalahin'i Simôna Petera, no anankiray tamin'izy roa lahy nandre ny tenin'i Jôhany, ka nanaraka an'i Jesoa. 41Ny nihaonan'i Andrea voalohany dia i Simôna rahalahiny ka nilazany hoe:
–Efa hitanay ny Mesia* (izany hoe i Kristy na hoe Voahosotra, raha adika)!
42Dia nentin'i Andrea nankany amin'i Jesoa i Simôna; ary nony nijery azy i Jesoa, dia nanao hoe:
–Ianao no Simôna, zanakalahin'i Jônà! Hantsoina hoe Kefasy#1.42 Kefasy: teny aramianina. ianao (izany hoe Petera na hoe Vato, raha adika)!
Antsoin'i Jesoa i Filipo sy i Natanaela
43Ny ampitson'iny, dia niroso nankany amin'ny faritany Galilea i Jesoa; tafahaona tamin'i Filipo Izy ary nanao taminy hoe:
–Avia hiaraka amiko!
44I Filipo dia avy any Betsaidà#1.44 Betsaidà: tanàna mifanila amin'i Kafarnahòma., tanàna fiavian-dry i Andrea sy i Petera. 45Tafahaona tamin'i Natanaela kosa i Filipo ka niteny taminy hoe: «Efa hitanay Ilay voalazan'i Mosesy tao amin'ny bokin'ny Lalàna* sy voalazan'ireo mpaminany*#1.45 Ampit Deot 18.18; Is 9.5-6; Ezek 34.23., dia i Jesoa zanak'i Jôsefa, Ilay avy any Nazareta.»
46Ary hoy i Natanaela taminy:
–Moa mba mety hisy zava-tsoa ve avy any Nazareta?
Dia novalian'i Filipo hoe:
–Ndao ianao hizaha!
47Nahita an'i Natanaela tamy nanatona Azy i Jesoa ka izao no teniny momba an'i Natanaela:
–Izany ka tena Israelita* tsy misy fitaka!
48Dia hoy i Natanaela taminy:
–Ahoana no ahafantaranao ahy?
Ka novalian'i Jesoa hoe:
–Talohan'ny niantsoan'i Filipo anao, dia hitako teo ambany aviavy#1.48 Araka ny tantaran'ireo mpampianatra jiosy, dia satrin'ny olona mialokaloka eo am-pototr'aviavy rehefa hamaky sy handinika ny Soratra Masina. ianao!
49Fa i Natanaela kosa nilaza taminy hoe:
–Mpampianatra ô, Ianao no Zanak'Andriamanitra, Ianao no Mpanjakan'i Israely*#1.49 Ampit Sal 2.7; Tsef 3.15.!
50Ary novalian'i Jesoa hoe:
–Mino ve ianao satria nilazako fa hitako teo ambany aviavy? Zavatra lehibe noho izany no mbola ho hitanao!
51Dia hoy koa i Jesoa tamin-dry i Natanaela:
–Lazaiko marina dia marina aminareo fa ho hitanareo ny lanitra misokatra mbamin'ny anjelin'Andriamanitra* miaka-midina eo ambonin'ny Zanak'olona*#1.51 Ampit Gen 28.12.!